उपत्यकाका नगरकोट, फुलचोकी र चन्द्रागिरिमा हिउँ पर्यो, हिउँ खेल्न जाने कि ?.. | suryakhabar.com
बलात्कारीलाई सजायँः नपुंसकता कि मृत्युदण्ड ?
Home पर्यटन/संस्कृति उपत्यकाका नगरकोट, फुलचोकी र चन्द्रागिरिमा हिउँ पर्यो, हिउँ खेल्न जाने कि ?..
उपत्यकाका नगरकोट, फुलचोकी र चन्द्रागिरिमा हिउँ पर्यो, हिउँ खेल्न जाने कि ?..
on: २७ मंसिर २०७६, शुक्रबार २०:०४ In: पर्यटन/संस्कृतिTags: No Comments
काठमाडौं । पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभावले आज देशैभर वर्षा भएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै धनगढीमा ६४, नेपालगञ्जमा ५५, डडेलधुरामा ४३, वीरेन्द्रनगरमा ४१ र दिपायलमा ३२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । त्यस्तै पोखरामा २२, जुम्लामा १८, भैरहवामा ९, ओखलढुङ्गा र दाङमा समान ५ तथा काठमाडौँमा ४ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
आज काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकभर वर्षा भएको छ । उपत्यकामा वर्षा र उच्च पहाडमा हिमपातसमेत भएकाले आज बढी चिसो महसुस गरिएको छ । उयत क्षेत्रमा हिमपात भएको छ ।
यसैबीच मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी बुलेटिन जारी गर्दै हाल देशको अधिकांश भू–भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही भू–भागमा हल्का वर्षा भइरहेको जनाएको छ । साथै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातसमेत भएको छ ।
काठमाडौँमा अहिले हल्का वर्षा भइरहेको छ । अपराह्नदेखि पानी पर्न शुरु भएको थियो । राति देशभर सामान्य बदली रही पश्चिमी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा साथै पूर्वका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । पश्चिमी उच्च पहाडीसहित हिमाली भू–भागमा भारी हिमपातको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । मध्य तथा पूर्वका उच्च पहाडीसहित हिमाली भेगमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
भोलि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने छ । आइतबार देशको पश्चिमी भू–भागमा सामान्य बदली र मध्य तथा पूर्वका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पश्चिमको केही स्थानका साथै मध्य र पूर्वका पहाडी भू–भागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम आठ र अधिकतम तापक्रम ११ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
नेपाल सबैभन्दा छिटो विकास भइरहेका विश्वका दश मुलुकको सूचीमा- अर्थमन्त्री खतिवडा
कात्तिक ७ देखि क्लिनफिड लागू हुन्छःप्रधानमन्त्री
आठ दिनपछि सम्झनाको दाहसंस्कार,
१४ आश्विन २०७७, बुधबार १७:३२
उपत्यकामा ९०२जना सहित देशभर थपिए आज १५ सय ५९ संक्रमित
१४ आश्विन २०७७, बुधबार १६:२२
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार २०:०४